4 သင့်ရဲ့ Instagram ကို Shine Make ရန်မီးရထားလမ်းကြောင်း Views စာ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား >4သင့်ရဲ့ Instagram ကို Shine Make ရန်မီးရထားလမ်းကြောင်း Views စာ
မီးရထားနဲ့ခရီးသွားကြသက်သာဖြစ်ပါသည်, ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတကြောင့်ပေးပါသည် စိတ်ဓါတ်ထိခိုက်သော အမြင်များ, အများကြီး prettier သင့်ရဲ့ Instagram ကိုအောင်ဘို့ပြီးပြည့်စုံသော. ဒီမှာပါ4သင့်ရဲ့ Instagram အကောင့်ထွန်းလင်းစေရန်မီးရထားလမ်းကြောင်းအမြင်များ.
မီးရထားလမ်းကြောင်းအမြင်များအမှတ် 1 – အနောက်အဘိဓါန် Highland လိုင်း, စကော့တလန်
စကော့တလန်နာမည်ကြီးအလှဆုံးအချို့ရှိပါတယ် ရှုခင်းများ နှင့်ကမ္ဘာအတွက်လမ်းကြောင်းအမြင်များလေ့ကျင့်. ဤ ရထားလမ်းခရီး ဝေးလံခေါင်သီမြေရိုင်းလွင်ပြင်၏ကျယ်ပြန့်အမြင်များကမ်းလှမ်း, Loch, နှင့်တောင်များ. အနောက်နိုင်ငံတွေအဘိဓါန် Highland လိုင်းပေါ်ခရီးသွားလာသည့်အခါ, သငျသညျဖို့လုံလောက်တဲ့ကံကောင်းလိမ့်မယ် အတှေ့အကွုံ ဒဏ္ဍာရီ Glenfiddich Viaduct. အကျွမ်းတဝင်မကြည့်ပါ? ကအတွက် Hogwarts Express ကိုအဖြစ် featured ကြောင့်အဲဒီင် ဟယ်ရီပေါ်တာရုပ်ရှင် ဂိမ်း. Imagine the double-taps those views will get.
ရေခဲမြစ် Express ကို, ဆွစ်ဇာလန်
သင်တစ်ဦးနှေးကွေးအရှိန်အဟုန်ရထားလိုပါကလမ်းကြောင်းအမြင်များ, ဒီသင်နှင့်သင့် Instagram ကိုနောက်လိုက်များအတွက်လမ်းကြောင်းဖြစ်ပါသည်. သင့်ရဲ့ပြိုးပြိုးပြက်ပြက်မြင်ကွင်းကျယ်ရှုမွငျကျော်ကြားတဲ့ Matterhorn တစ်ဦးအမြင်ဖြင့်စတင်မည်. Zermatt ထံမှ, သင်တစ်လျှောက်သင့်ရဲ့ခုနစ်နာရီရထားလမ်းခရီးကိုလုပ်ပါလိမ့်မယ် ယူနက်စကို စိန့် Moritz မှကမ္ဘာအမွေအနှစ်များလမ်းကြောင်း. ဘုန်းကြီးသောအဖြစ်ဓါတ်ပုံကိုရယူရန်ခံစားကြည့်ပါ alpine vistas views pass your window.
အဆိုပါ Flam မီးရထား, နော်ဝေ
တစ်ဦးကတိုတောင်းခရီးစဉ် – Myrdal ထံမှ Flam ဤတနာရီကြာရထားစီးရုံအမြင်များအဘို့ဖြစ်၏. နှင့်သင့်ကံ Insta နောက်လိုက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါလိမ့်မယ်. သင်က Nali မြင်ရပါလိမ့်မယ် ပြွန်ခေါင်းလမ်း, ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းတဲ့ Kjosfossen ရေတံခွန်, နှင့်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ fjords နော်ဝေ.
Our closing option for train route views – Inlandsbanan, ဆွီဒင်
အဆိုပါ Glacier Express ကိုသင်တို့အဘို့အလုံလောက်အောင်ဆီးနှင်းနှင့်ရေခဲမကြီးဘူးဆိုရင်, ထို့နောက်သင်ပြည်တွင်းရေကြောင်းလိုင်းကိုချစ်ပါလိမ့်မယ်. ဒါဟာ 14 နာရီရထားစွန့်စားမှု Gallivare ဆီသို့ untamed စကင်ဒီနေးမြေပြင်အနေအထားကတဆင့်သူ့ရဲ့လမ်းမချခင် Kristinehamn အတွက်စတင်. သင့်ရဲ့ပြတင်းပေါက်ထဲက, သငျသညျအာတိတ်စက်ဝိုင်းကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်နဲ့ – သငျသညျ peeled သင်၏မျက်စိစောင့်ရှောက်လျှင် – reindeer ပါပုံစံအချို့တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်, ဒရယ်ချိုပြားမျိုး, နှင့်ဆတ်.
ဒါကြောင့်ယခုသင်ရထားလမ်းကြောင်းအမြင်များနှင့် ပတ်သက်. လေ့လာသင်ယူသင့် Instagram ကိုအကောင့်ဖွင့် polish နှင့်အချို့သောအသစ်သောနောက်လိုက်များရရှိနေစဉ်ဘဝ-ပြောင်းလဲနေတဲ့ရထားလမ်းစီးနင်းအပေါ်သွားကြဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလားများမှာပြီးနောက်? မှာယနေ့သင့်ရဲ့အိပ်မက်ရထားခရီးစဉ်ကိုဘွတ်ကင်လုပ်ရန် တစ်ဦးကရထား Save. And you can also check our Instagram account instagram.com/saveatrain
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/4-train-route-views-to-make-your-instagram-account-shine/ - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/in_routes_sitemap.xml, သင် / ru အတွက် / သို့မဟုတ် / TR နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများပြောင်းလဲနိုင်သည်.
#scotland Instagram ကို ဆွီဒင် ရထားခရီးသွား ခရီးသွား travelnorway travelswitzerland
ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဒိန်းမတ်, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ရထားခရီးသွားယူကေ, ဥရောပခရီးသွား